Kọmputa Nzuzo na Free Software: vingkwalite anyị nche | Site na Linux
La «Seguridad de la Información», mpaghara ohuru a nke ihe omuma mmadu, taa ọ ka metụtara ihe niile gbasara ndụ mmadụ na ọha ugbu a. Yabụ, ọ hapụla ngalaba nyocha siri ike ma tinye ya na mpaghara mmekọrịta.
Ma ugbu a, teknụzụ ahụ na-eyi ọha egwu, onye ọ bụla ma ọ bụ mkpokọta, ọha na eze na ndị onwe, la «Seguridad de la Información» na-anwa ịnye usoro ma ọ bụ usoro, site «Seguridad Informática», la «Ciberseguridad» ma ọ bụ «Informática Forense» n'ime atụmatụ nke atumatu ọhaneze nke States na Society n'ozuzu ha. Iji gbalịa-ekwe nkwa ruo n'ókè o kwere mee ihe «Seguridad», na «Privacidad» na «Anonimato» nke ndị otu niile nke Society.
Ihe a niile, n'ihi na nnukwu ọgbara ọhụrụ na teknụzụ na-ada karịa iwu mba na mba., dị adị ma zubere, iji chekwaa ọrụ mmadụ niile, nke nwere ike imetụta ma ọ bụ enweghị nsogbu site na nkwupụta teknụzụ a kwuru.
1 Ikike nzuzo
1.2.1 Ikike ichedo Ozi Nkeonwe
2 Kedu ihe bụ Kọmputa Nzuzo?
3 Nzuzo na Enweghị Nzuzo
4 Kọmputa Nzuzo na Free Software
4.1 Free Software Nnwere Onwe
4.2 Uru nke sọftụwia efu
Oghere nke teknụzụ kere na-eme ka egwu na ihe egwu dịrị «Sociedad» mgbe ọ dị, anaghị achịkwa ya nke ọma site na mbido, ọkachasị na iwu nke «Privacidad». Universal iwu na ọ bụ dị na «Organización de las Naciones Unidas (ONU)», na nke mejupụtara na «Declaración Universal de los Derechos Humanos» nke afọ 1948, dị ka ndị a:
O dighi onye a ga-akwagide na nnyonye anya ezighi ezi na ndu onwe ya, ezinulo ya, ulo ya ma o bu akwukwo ozi ya, ma obu imegide ugwu ya ma obu aha ya. Onye o bula nwere ikike nchedo iwu megide nnyonye anya ma o bu mbuso agha ndi a ”.
Ikike «Privacidad», nke e mechara kwado na 1966, site na «Asamblea General de Naciones Unidas», Nkeji edemede 17 nke «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»». Na mgbe ahụ, n'ọtụtụ oge ndị ọzọ site na mba dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche iji gbochie ahụmịhe na-esochi ọgụ na ndụ mmadụ nke biri kemgbe «Primera Guerra Mundial» na «Nazismo», nke «Fascismo» ma ọ bụ «Macarthismo», na ọtụtụ ndị ọzọ ruo taa.
N'ihi ihe a niile, ma na «ONU» dị ka ndị ọzọ ma ọ bụ ihe atụ, eguzosie ike rue taa, ma nnukwu ma micro, usoro nke ogige zuru ụwa ọnụ na nke na-enweghị ókè iji chebe mpaghara ndị na-abụghị nke ọha ya mere na etinyere oke nke Steeti na Gọọmentị ga-edobe ma kwanyere maka nnabata na ndụ ndị amaala.
Mana, ma ugbu a ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, ọ na-agakọrịta «realidad digital» o «cibernética»: Enwere ike itinye ụkpụrụ iwu ndị a site na anụ ahụ gaa na ụwa nke mebere ụwa? Ezigbo nnwale na nke a bụ ihe gbasara usoro eji eme ihe site na «Resolución 45/95» nke «Asamblea General de Naciones Unidas» na Disemba 14, 1990, iji guzobe ntuziaka banyere nhazi nke «archivos de datos personales informatizados».
Ikike ichedo Ozi Nkeonwe
Mbu, ebe emere usoro iji tinye usoro iwu metụtara ya «archivos de datos personales informatizados», ma mejuputa iwu dị mkpa nye ndị Steeti, na ọnọdụ na «Derecho a la protección de los Datos Personales», nyere ihe ize ndụ na mmebi iwu ndị a pụrụ itinye na ha bụ́ ndị a na-ekpughepụ na kọmputa nke usoro na-arịwanye elu nke kọmputa.
Otu n'ime ihe ndị ọzọ dị mkpa ikpe, bụ «Informe del Consejo de Derechos Humanos (A/72/53)», ebe o doro anya na ijeụkwụ nke teknụzụ nke na-enye ndị mmadụ ohere iji ya «TIC», n'otu oge ahụ, na-abawanye ma na-eme ka ikike nke Gọọmentị, Companlọ Ọrụ na Ndị Mmadụ rụọ ọrụ nke «vigilancia, interceptación y recopilación de datos».
Ya mere, ọ na-agba ndị gọọmentị ume ka ha zere omume ndị na-akpata mmebi ma ọ bụ imebi iwu nke ikike mmadụ, karịsịa ikike nnwere onwe. «Privacidad», guzobere na Nkeji edemede 12 nke Nkwupụta ofwa Nile Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na na Nkeji edemede 17 nke ọgbụgba ndụ mba ụwa gbasara ikike obodo na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Kedu ihe bụ Kọmputa Nzuzo?
Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ nke «Seguridad de la Información» nke ahụ na-amụ ihe niile metụtara nzuzo ma ọ bụ nchekwa data. N'ịbụ onye nke a ghọtara, nke ahụ bụ, nzuzo ma ọ bụ nchebe nke data dị ka akụkụ nke «Tecnología de la Información (TI)» nke metụtara ikike nke otu nzukọ ma ọ bụ onye ọ bụla nwere iji chọpụta ihe data dị na kọmputa kọmputa nwere ike ịkekọrịta na ndị ọzọ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere ike ikwu ya n'ụzọ dị mkpumkpu, na Ọ bụ ikike mmadụ (ma ọ bụ ihe ọ bụla) idebe data nkeonwe dijitalụ ha ma ọ bụ ihe nzuzo n'ime akụrụngwa akụrụngwa na nkwukọrịta ha. N'ịbụ onye a ghọtara, site na data nkeonwe, ozi ọ bụla gbasara "mmadụ dị ndụ amụrụ ma amata", dị ka European Commission kọwara na Iwu Nchedo Data General (RGPD).
Nzuzo na Enweghị Nzuzo
Okwu ndị a na-agbagwoju anya, ya mere ọ bara uru ịkọwapụta ọzọ na ọ bụ ezie na ha abụọ nwere ike iyi otu, ha abụghị otu.
Mgbe, la «Privacidad» bụ ihe mmadụ na-atụ anya na onye ọ bụla nwere ihe ọmụma banyere onwe ya na otu ụzọ nke atọ ma ama ma ọ bụ jiri ozi a mara «Anonimato» bụ ihe onwunwe ma ọ bụ njirimara metụtara na a «Sujeto» nke gosipụtara na enweghị ike ịmata ya n'ime otu ụlọ ọrụ ndị ọzọ (isiokwu), nke a na-akpọkarị «Conjunto anónimo», ma ọ na-abụkarị isiokwu niile nwere ike ime (ma ọ bụ metụtara ya).
Ma mgbe, ihe «Privacidad» n'onwe ya nwere njikọ chiri anya na ibu ọrụ nke onye ọrụ mgbe ịkekọrịta ọdịnaya ha na ,ntanetị, «Anonimato» ọ nwere njikọ chiri anya na omume nke onye ọrụ iji hụ na enwere ohere ha na Internetntanetị n'ụzọ nke na amataghị njirimara ha na data ndị ọzọ metụtara ya.
Kọmputa Nzuzo na Free Software
O doro anya, nchegbu nke dị na ụwa gbara gburugburu ichebe ikike «Privacidad» na «Seguridad de la Información» site na mmebe iwu nke nwere ikike ịnọ n'ihu nkà na ụzụ n'onwe ya.
Na mgbakwunye na esemokwu ndị a na-ahụkarị n'ụgbọelu mmebe iwu, ọnọdụ ndị dị na teknụzụ kachasị dabara adaba iji luso ihe egwu dị na nke ndị ọrụ gosipụtara mgbe ha na-agbanweta ozi na-agagharị ugbu a na enweghị esemokwu, yana nkwekọrịta doro anya n'etiti teknụzụ nwere onwe na nke onwe. . Na ọkwa nke «Seguridad de la Información», las «Tecnologías libres» Ha anọwo na-enweta ala, na-agbagha nkwenkwe ọdịnala ndị na-egosi na ihe a ga-ewere dị ka ihe dị nchebe ọ ga-abụrịrị ihe nzuzo na nke a na-apụghị ịnweta.
Free Software Nnwere Onwe
Ihe nnwere onwe anọ dị mkpa nke teknụzụ bụ n'efu bụ:
Ebumnuche nke na-adighi adaba, kamakwa o na-enye ohere inye ogidi nke «Seguridad de la Información», nke ahụ bụ, nzuzo, iguzosi ike n'ezi ihe, nnweta, gbakwunyere «Seguridad Informática» na «Privacidad Informática», dị ka a tụlere na mbụ n'isiokwu ahụ Nchebe Cyber, nke e kwuru na ya:
“… Ọ bụ ekele maka «cuatro (4) leyes básicas del Software Libre» nke na-enye ohere nzaghachi ọ bụghị naanị ịrụ ọrụ nke ọma ma dị irè karị, kamakwa dị ike, dịgasị iche iche yana yana ntuziaka akọwapụtara nke ọma. N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị boro ebubo buru ibu na «Software Libre, Código Abierto y Linux»".
Uru nke sọftụwia efu
N'ikpeazụ, anyị nwere ike itinye ya na ọkwa nke «Privacidad», free software na-enye anyị mgbe nile ukwuu di na nke a, ebe ọ bụ na anyị nwere ike nyochaa koodu ahụ, ma mara nke ọma ihe ọ na-eme n'ime izugbe, ma ọ bụ mara ihe usoro X na-eji ozi anyị. Ma rue mgbe anyị nwere ike ịchọpụta ọnụ ụzọ azụ nwere ike iji nyochaa data nkeonwe gbasara anyị ma ọ bụ onye ọrụ, ebe na sọftụwia nwere nke ọ bụla, nke a anaghị adị mfe ịme.
Dị ka, anyị nwere ike ịhụ la «Privacidad» Ọ bụghị ihe ọ bụla, ọ bụ a «Derecho Humano fundamental» nke gọọmentị, steeti, ụlọ ọrụ, na ndị ọzọ ma ọ bụ ndị otu ndị ọzọ ga-ekwesị ntụkwasị obi.
N'ụzọ dị otú a na ọtụtụ mmezu zuru ụwa ọnụ na nke a mezuru, dị ka Cikpụrụ nke Iwu na iguzosi ike n'ihe nke Akwụkwọ Iwu nke United Nations nke gosipụtara na ekwesighi ịnakọta ma ọ bụ hazie ozi metụtara ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ hazie ya na usoro ezighi ezi ma ọ bụ nke na-ezighi ezi, ma ọ bụ jiri ya mee ihe megidere ebumnuche na ụkpụrụ nke Charter.
Na ikpe azu ma obughi ihe ozo, odi nma icheta na Office nke United Nations High Commissioner maka Human Rights na-echekwa ikike anyị nwere nzuzo na afọ dijitalụ.
Nakwa na ọ bụ ọrụ maka ịzụlite tupu «Naciones Unidas» akụkọ kwekọrọ na nzuzo na afọ dijitalụ, iji duzie ụzọ ndị otu States kwesịrị ịnwe n'usoro iwu, nyere na mpụ ndị nwere ike ime megide ikike nke nzuzo, na afọ dijitalụ, ga-anọgide na-agbanwe dị ka teknụzụ n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Kọmputa Nzuzo na Free Software: Imezi anyị nche
Edemede mara mma nke ukwuu n’otu isi okwu ahụ agbanyeghị na ị na-akatọ ya, eleghara ya anya ma na-akwụ ụgwọ ya niile
- Nnukwu ihe atụ bụ ngwa izipu ozi ma jiri nke ụlọ ọrụ nwetara (nke anaghị egbutu ya) gafere akụkụ nke mmeri nzuzo, ọ nwere onye jụrụ ajụjụ banyere iji ozi izi ozi ahụ mgbe nnweta nke netwọk mmekọrịta ahụ? Mba, maka na mmadụ niile nọ ya ma ọ dịkarịrị ha mkpa ka ha metụ karịa ịnwe ụzọ ndị ọzọ.
- Ihe omuma atu ozo bu ngwa a aghọọla ewu ewu n'otu ntabi anya, na mmadụ ga-aka nká site na nzacha, nke achọpụtala iji nakọta ma kesaa ọtụtụ ozi nzuzo nke onye ọrụ na ndị ọzọ. n’eluigwe?
Ha bụ ihe atụ abụọ nke ọtụtụ ...
Mgbe mmadụ na-ekwu maka nzuzo n'agbanyeghị ịbụ-ma ọ bụ kwesịrị- ọ na-enye mmetụta na ha na-ekwusa ozara ... mana n'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga-ekweta na ị bụ obi ike Linux Post Wụnye.
Dị ka mgbe niile, na-ekele gị maka nkọwa ziri ezi na nke bara uru banyere isiokwu ndị bipụtara, yana ị na-ekwu "maka okwu a dị oke mkpa" maka mmadụ niile.
kọmputa ekwo Ekwo dijo
Ekele m magburu onwe ya post m masịrị ya na ịkekọrịta
Zaghachi gị na kọmputa
Ekele Electronic Beehive! Daalụ maka echiche gị dị mma. Nke ahụ bụ otu n'ime 4 m mere n'okwu ahụ.
E wepụtalarị ụdị ọhụụ ọhụụ nke Blender 2.80
Fail2Ban nhọrọ magburu onwe ya iji weghachite mwakpo ọjọọ na sava gị